यी १८ वर्षीय युवकको पेटमा हुर्किँदैछ ४ महिनाको बच्चा – Wow Sansar
यी १८ वर्षीय युवकको पेटमा हुर्किँदैछ ४ महिनाको बच्चा
January 3, 2021 70
काठमाडौं । आमा बन्नु हरेक महिलाका लागि सबैभन्दा विशेष पल हुन्छ । किनकी उनको शरीरभित्र उनको आफ्नै अंशको रुपमा नयाँ मान्छे बढिरहेको हुन्छ ।
तर के तपाईंले कहिल्यै कुनै पुरुषले समेत यस्तै मातृत्वको अनुभूति गर्न पाएको देख्नुभएको छ ? सायद छैन होला । किनकी पुरुषहरु आमा बन्न सक्दैनन् ।
मिकीको जन्म पुरुषकै रुपमा भएको थियो । उनकी आमाको गर्भको जाँच गर्दा गर्भमा छोरी रहेको डाक्टरहरुले बताएका थिए । तर जब छोराको रुपमा मिकी जन्मिए, डाक्टरसमेत अचम्ममा परे । उनको शरीरमा पुरुषकै यौनांग थिए । तर उनको शरीरभित्र चाहिँ महिलाको जस्तै पाठेघर, अण्डासय लगायतका अंग रहेछन् । यसलाई चिकित्सा भाषामा ‘पर्सिस्टेन्ट एमलेरिएन डक्ट सिन्ड्रोम’ अर्थात् पिएमडिएस भनिन्छ ।
केटाको रुपमा जन्मिए पनि बाल्यकालदेखि नै उनको आनीबानी केटीको जस्तो हुन थाल्यो । आफ्नो जिउडाल, मनोकांक्षा तथा आनीबानीहरु केटीको जस्तो हुँदा उनले आफ्ना साथीसँगी तथा समाजसामु लज्जित महसुस गरेका थिए । तर उनलाई उनको परिवारले पूरा साथ दियो ।
Prevखुकुरी देखाउदै जबर जस्ती बिहे गरे अहिले बे,हाल बनाएर छाडे
Nextपोर्चुगलमा कोरोनाबाट दुई नेपालीको मृ,त्यु
पराराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भारत गएको भोली पल्टै नेपालले पायो कोरोना विरुद्धको खोप आपतकालीन प्रयोगका लागी अनुमती
बहिनीको बिहेको लागि पैसा निकाल्न दाजु बैंक गए, घर आइपुग्यो शव
श्वेता र बिजेन्द्रबिचको यस्तो हर्कत गरेको टिकटक भाइरल (6739)
आफ्नै कार, नेपालगञ्ज र पोखरामा घर, ३३ बर्षकी युवती यति भएपछि केटालाई के चाहिन्थ्यो ! (3853)
बागलुङमा बाघसंग दोस्ती गर्ने दिपेन थापा आए काठमाण्डौ, कारण यस्तो,बाघसंगको दोस्तीबारे यसो भन्छन (भिडियो सहित) (3268)
का’टिएको हात खुट्टामा जोडिदिए पछि… (1305)
एकाबिहानै आयो खुसीको खबर ! सोच्नै नसक्ने गरि एकासी ह्वात्तै घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मुल्य ! (1110)
भर्खरै भयो मुटु कापने दु,र्घटना आमा र छोराको घटनास्थलमै मृ,त्यु (1074)
उडान बन्द गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा (1045)
नेहा कक्कडले श्रीमान् रोहनप्रित सिंहलाई दिइन् धम्कीः भनिन्, ‘एक्सलाई फोन गर्यौ भने…’
ललितपुरको चाँगाथलीमा मृत भेटिए दम्पत्ती
महिला हुन् कि बच्चा जन्माउने मेसिन ? २१ सन्तान जन्माइसकेकी महिला फेरि गर्भवती
एक्कासी घट्यो खाना पकाउने ग्यासको भाउ…